Ny alim-borona vita amin'ny alim-borona manodidina 1050 1070 3003 dia ny fahadiovana goavana - Zhejiang Shuanglin Jiate Metal Technology Co., Ltd
Modelnummer: 1050 1070 3003
anarana nomena: Alimino ny alim-borona manodidina ny alim-borona 1050 1070 3003
• Miorina ny kitapo ahodin-daza ary miova ho vola madinika. Ny labozia tsirairay dia manana ny Cast No ary tsy misy ny fahadisoana rehetra.
• Ny kitapo niorina dia natambatra tao anaty lafaoro. Ny afo mirehitra dia miantoka ny fifehezana ny mari-pana amin'ny hafanana.
• Voaroaka ao amin'ny HOT ROLLING MACHINE ireo takela-by ireo ary avy eo amin'ny milina COLD ROLLING mba hanomezana anay alim-bary amin'ny alàlan'ny alim-borona. Ny mpitantana fanaraha-maso kalitao dia manara-maso ny fandaharam-potoana mba hiantohana ny fandoavana ny fandeferana.
• Ny takelaka vita amin'ny fiara Rolling dia mety lava lavitra noho izany dia tapaka amin'ny antsasa-manila ireo lamba ireo amin'ny fampiasana SHEARING MACHINE.
• Aorian'io dingana io, dia apetaka amin'ny alim-borona amin'ny alàlan'ny CIRCLE CUTTING MACHINE ny lamba.
FIKAMBANANA ALUMINUM HEIZINA
• Rehefa tapaka ny alim-borona, dia averina any amin'ny lafaoro fanamainana izy mba hahatonga ilay faribolana ho malefaka ary tsy hanimba ny dingana hafa ho avy. Zava-dehibe ihany koa ny fiantohana ny fifehezana ny fahamatorana amin'ny fafana.
F: Azonao atao ve ny mamolavola ny endriny sy ny habeny?
A: Eny, ODM & OEM dia misy.
F: Afaka manana santionan-javatra ve aho?
A: Mazava ho azy, samples (1-3 pcs) na 2-3 kg
F: Rahoviana isika no afaka maka samples sy entana?
A: Samy halefa avy hatrany ny samples raha manana tahiry, manao ny volavolam-panafody 2-3 andro.
Ny entana dia alefa amin'ny 30days rehefa voamarina ny baiko.
F: Inona no karazana fandoavanao azonao omena?
A: Afaka manolotra L / C, T / T, Western Union, Paypal sns.
Ny faribolana dia tsara tarehy sy misaraka (tsy mijanona), fa tsy toy ireo voankazo ao amin'ny efitrano fandroana aorian'ny fametahana.
Ny faritr'asa dia mifanentana amin'ny rafitra famatsian-koditra ho an'ny famokarana: tsy manamaivana ny laharana izy ireo ary tsy mila fisintonana amin'ny tanana.
Ny karazana môtera tsara kokoa amin'ny vokatra azontsika dia mampifanaraka ny fiheveran'ny boriborintany araka ny fomba fanodinana mekanika (ampiasain'ny mpividy manamboatra tavoahangy / pans lacquered amin'ny akanjo antitra na fiarovana).
Ny fanasan-java-manify dia manome rafitra miorina amin'ny alàlan'ny metaly hendry sy ny endriky ny mekanika, izay mamela ny halatra metaly ambony.